राष्ट्रका नाममा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः कोरोना नियन्त्रण, निरोगी नेपाल निर्माणदेखि अर्थतन्त्र पुनर्रुत्थानमा जोड « Mechipost.com
राष्ट्रका नाममा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनः कोरोना नियन्त्रण, निरोगी नेपाल निर्माणदेखि अर्थतन्त्र पुनर्रुत्थानमा जोड
प्रकाशित मिति: १२ जेष्ठ २०७७, सोमबार १८:०५
फिदिम । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुभएको छ ।
साँझ ५ः३० बजेदेखिको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले कोरोना भाइरस नियन्त्रणलाई सरकारले मुख्य प्राथमितामा राखेको वताउँदै सबै बल कोरोना नियन्त्रणमा लगाइने वताउनुयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शिथिल बनेको अर्थतन्त्रको पुनर्रुत्थान, निरोगी नेपाल निर्माण, रोजगारी सिर्जना, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने लगायत विशेषमा सम्बोधनमा विशेष जोड दिनुभयो ।
प्रस्तुत छ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनका मुख्य अंशहरुः
जोखिमले राज्यका सबै अङ्गलाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिएको छ । लकडाउनले सङ्क्रमित पहिचान, सङ्क्रमण विस्तार र आइसोलेसन निर्माण र ब्यवस्थापनमा सहयोग पु¥याएको छ । महामारी नियन्त्रणको स्थिति सन्तोषजनक भएपनि चुप लाग्न सकिन्न । कोरोना विरुद्धको लडाई लामो छ ।
कोरोना परीक्षणसम्बन्धी प्रयोगशालाको सातै प्रदेशमा विस्तार भई २० वटा पुगेका छन । परीक्षणको दायरा विस्तार र औषधि र उपकरण ब्यवस्थापन थप बढाइनेछ । जनसंख्याको कम्तिमा २ प्रतिशतलाई परीक्षण गरिनेछ ।
स्थानीय तहलाई सबै सशक्त बनाउने, राहत वितरण, अनुगमन, क्वारेन्टाइन निर्माणमा स्थानीय तहलाई सशक्त बनाइन्छ । बन्द होटल र सार्वजनिक संरचनालाई क्वारेन्टाइन बनाइनेछ ।
सङ्क्रमित र क्वारेन्टाइनलाई ब्यवस्थापन गरिनेछ । महामारी फैलिएको ठाउँमा युद्धस्तरमा परीक्षण हुनेछ । सबै सरकारी निकायलाई चुस्त बनाइनेछ । चुनौति सामना गर्न नसक्ने सबैको नेतृत्व फेरिन्छ ।
केन्द्रीय सरकारका योजनालाई थप प्रभावकारी बनाई तीनै तहवीच जीवन्त सम्वाद र प्रभावकारी समन्वय गरिनेछ । त्यसका लागि सम्पर्क ब्यक्ति तोकिनेछ ।
सबै पक्षलाई समेटेर परामर्श समिति बनाइनेछ । कोरोना विरुद्धको युद्धलाई कमजोर हुन दिइने छैन् । देशबासी जोखिममा पर्न नदिन सरकार दृढताका साथ लागिरहनेछ ।
विदेशमा धेरै नेपाली रहेका देशसँग सम्पर्क गरिएको छ । सबैले नेपालीको सुरक्षामा ध्यान दिएका छन् । स्वदेश फर्कनुपर्ने अवस्थामा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने योजना अघि बढ्नेछ । देश भित्रको तयारी र बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्थावीच तादम्यता मिलाइनेछ ।
भारतबाट घर फर्कने परीक्षणविना सीमा पार गरिरहँदा परीक्षणको अभाव र महामारी फैलन योगदान पु¥याएको छ । नेपाल फर्केकाले क्वारेन्टाइनमा बस्न, परीक्षण गर्न र सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ ।
कोही पनि रहरले विदेशिएका र सङ्क्रमण बोकेर आएका होइनन् । कसैको पनि आत्मसम्मानमा चोट नपु¥याऔँ । बाहिरबाट फर्कनहरुले चिकित्सक र प्रशासनको सल्लाह मानेर समुदायमा संक्रमण फैलन नदिन सहयोग गर्नुपर्छ । केही अहिलेको स्थितिलाई भाँड्न तत्व लागेका छन् । त्यसबाट बच्नुपर्छ ।
एसईई परीक्षाबारे आवश्यक नीतिगत ब्यवस्था अघि बढ्नेछ । आर्थिक कृयाकलापलाई अघि बढाइने र खेतीपातीलाई अघि बढाइनेछ । आवागमनलाई आवश्यक मात्रामा सिमित गरिनेछ । गरिबी र बेरोजगारी समाधान गर्न सरकार सचेत छ ।
आयात घटाउने, आत्मनिर्भर हुने र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम पारित भइसकेको छ । अर्थतन्त्र अघि बढाउने र ठूला आयोजना अघि बढाउने काम भइरहेको छ । ठूला आयोजना निर्माण र पुनर्निर्माणको अघि बढिरहेका छन् ।
उद्योगहरु अब सञ्चालनमा आउनेछन् । प्रशासनको निगरानीमा उद्योगसम्म पुर्याइनेछ । सम्बन्धीत उद्यमीले तोकिएको प्रोटोकल पालना गराउनुपर्नेछ । यसको प्रभावकारिताका आधारमा अन्य ब्यवसाय सञ्चालनमा आउनेछ ।
उद्योग ब्यवसायलाई राहत दिइनेछ । कर छुट, कर्जा छुट र सहुलियत दिइनेछ । शिथिल अर्थब्यवस्थालाई पुनरुत्थान गर्ने योजना आउनेछन् । सामाजिक सहायता र सामाजिक सुरक्षामा कुनै कटौती हुँदैन् बरु विस्तार हुनेछ ।
रोजगारी गुमाउनेहरुलाई उपयुक्त शीप र अवसर दिइनेछ । विकास निर्माणका कार्यहरुमा रोजगारी र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई रोजगार सेवा केन्द्रमा परिणत गरिनेछ ।
निरोगी नेपाल निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीका पाँच अपील छन्ः
१. उपलब्ध आहारलाई स्वस्थ बनाएर खाऔँ,
२. शारीरिक रुपमा स्वस्थ रहन नियमित ब्यायाम गरौँ,
३. सरसफाईमा ध्यान दिऔँ, फोहोरमा नबसौँ,
४. यथासक्य सफा हावा लिऔँ, र
५. मानसिक चिन्ता नलिऔँ, उच्च आत्मविश्वास राखौँ ।
अहिलेको मृत्युको अवस्था सामान्य हो । अन्य फ्लूले पनि यो भन्दा धेरैको ज्यान लिन्छ । आनीबानी र आहारमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता भने जरुर छ । कोरोनामुक्त नेपालका लागि प्रतिरोधात्मक र उपचारात्मक पद्धति अपनाइनेछ । नेपालीको उच्च प्रतिरोध क्षमता छ । त्यसले कोरोनालाई जित्नेछ ।